Ifektri yamakristalu e-Q-switched - Abakhiqizi baseChina Q-switched, Abaphakeli
Ukusiza ukuklama imithombo ye-laser yombuso oqinile futhi onokwethenjelwa, i-DIEN TECH inikeza uchungechunge lwamakhemikhali we-Q-switching crystals ukufanisa izinhlelo, kufaka phakathi i-Co2 +: MgAl2O4 (Co: Spinel), ekhipha kusuka ku-1.2 kuye ku-1.6μm, ikakhulukazi, ngeso -safe 1.54μm Er: glass laser, but also works at 1.44μm and 1.34μm laser wavelengths.Cr4 +: YAG, okuyizinto ezifanelekile ze-Nd: YAG namanye ama-lasers angama-Nd ne-Yb asebangeni lobude obungu-0.8 kuye ku-1.2um. Ukuzinza okuphezulu nokuthembeka, impilo ende yensizakalo nomkhawulo omkhulu wokulimala.
I-KD * P EO Q-Shintsha
I-EO Q switch iguqula isimo sokuhlukaniswa kokukhanya okudlula lapho lapho amandla kagesi asetshenziswayo enza ushintsho lwe-birefringence ku-crystal electro-optic efana ne-KD * P. Uma esetshenziswa ngokuhlangana nama-polarizers, lawa maseli angasebenza njengama-switch switch, noma ama-laser Q-switch.
Ukushintshwa kwe-RTP Q
I-RTP (Rubidium Titanyle Phosphate - RbTiOPO4) yinto manje esetshenziselwa kabanzi izinhlelo ze-Electro Optical noma kunini lapho kudingeka khona izintambo eziphansi.
LiNbO3 Crystal inezinto ezihlukile ze-electro-optical, piezoelectric, photoelastic kanye nonlinear optical. Ziyinkimbinkimbi kakhulu. Zisetshenziswa ekuphindaphindeni kwe-laserfrequency, optics nonlinear, Pockels cell, optical parametric oscillators, amadivayisi we-Q-switching lasers, amanye ama-acousto-opticdevices, amaswishi we-optical we-gigahertz amaza, njll. Kuyinto enhle kakhulu yokwenziwa kwamagagasi we-optical, njll.
Co: Spinel Amakristalu
Ama-passive Q-switch noma ama-absorbable we-satable enza amandla amakhulu we-laser ngaphandle kokusebenzisa i-electro-optic Q-switch, ngaleyo ndlela anciphise usayizi wephakheji futhi aqede amandla kagesi aphezulu. Co2+: MgAl2O4 kuyinto entsha ngokuqamba yokwenziwa kwe-Q-switching kuma-lasers akhipha kusuka ku-1.2 kuye ku-1.6μm, ikakhulukazi, nge-1.54μm Er ephephile yamehlo: i-glass laser, kodwa futhi isebenza kuma-wavelengths we-1.44μm ne-1.34μm. I-Spinel yikristalu eqinile, ezinzile epholisha kahle.
I-Cr4 +: YAG kuyinto ekahle yokwenziwa kwe-Q kokushintshwa kwe-Nd: YAG namanye ama-lasers enziwe nge-Nd ne-Yb ebangeni lobude obungu-0.8 kuye ku-1.2um.Kungukuzinza okuphezulu nokuthembeka, impilo yensizakalo ende nomkhawulo omkhulu wokulimala.